यी हुन् विश्वका सात चर्चित यौन बजार
पछिल्लो समयमा सहबास बजार विश्वमा नै फस्टाउँदै गएको छ । कतिपय देशहरुमा यौन बजार वैध छ भने कतिपय देशहरुमा बर्जित भएपनि गोप्य रुपमा सहबास बजार फस्टाइरहेको छ । ती मध्ये
मुम्बई । बलिउड फिल्म ‘हेट स्टोरी २’ की नायिका सुरवीन चावलाले जनवरीमा आफ्नो विवाहको खुलासा गरेर सबैलाई चकित बनाएकी थिइन् । उनले आफ्नो पूरानो प्रेमी अक्षय ठक्करसँग इटालीमा विवाह गरेकी
१४ वर्षीय बालकले देउता प्रकट हुन्छन् भनेपछि हेर्नेहरुको घुंईचो
सरिता चलाउने, सल्यान । सल्यानको सदरमुकाम खलंगा निवासी १४ वर्षीय बालक विजय रानाले बुघवार दिउसो ठीक १२ बजे यहां जमिन मुुनिबाट देउता प्रकट हुन्छन् भनेपछि देउता हेर्न त्यहाँ मान्छेहरुको घुईचो
नांगो व्यक्तिद्वारा गोलीको वर्षा
नासभिल्ले, (एजेन्सी) अमेरिकाको टेन्नेसेको नासभिल्लेको वाफल हाउसमा एक नांगो बन्दुकधारीले जथाभावी गोली चलाउँदा तीन जनाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। उपनगर एनिटओकमा स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान ३ बजेर २५ मिनेट
पोर्न इन्डस्ट्रीका नायक-नायिकाले कति कमाउँछन् ?
एजेन्सी। खुला संस्कृतिको कारण पश्चिमी मुलुकमा झाङ्गिएको पोर्न इन्डस्ट्री सेक्सलाई बन्देज लगाउँदा समाजमा उम्रिएको गलत व्यावसाय हो तर यसका दर्शक विश्वभर फैलिएका छन्। यो व्यावसाय निकै पैसा हुने कारण झनझन् मौलाउँदै
काठमाडौं । धर्म शास्त्र अनुसार ब्रह्माण्डमा चार युग रेहका छन् । जसमा सत्य, त्रेता, द्वापर र कलियुग पर्छन् । हिन्दु शास्त्रका अनुसार चार मध्येको अन्तिम कलि युग हो । यो
यस्ता छन निर्वस्त्र भएर युवाका कपाल काट्ने युवतीहरू
काठमाडौं । अब समय परिवर्तनसँगै व्यवसायले पनि त्यस्तै परिवर्तन लिइरहेको छ भनेर यसले प्रमाणित गर्दछ । यो यस्तो शैलुन हो जहाँ युवतीहरू टपलेश भएर ग्राहकको सेवा गर्ने गर्छन् । अस्ट्रेलियाको
२२ रुपैयाँ भाडामा छानीछानी तरुनी
काठमाडौँ । ब्यापारीहरु नाफा कमाउन निभिन्न उपाएहरु अपनाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । बेलाबेला ठूलाठूला सपिङ सेन्टरहरुमा बिभिन्न अफर तथा पुरस्कार राखेको त तपाईँलाई पनि थाहा होला र धेरैले त
सिंगापुरसिटी, (एजेन्सी) अधिकांश मानिसका लागि जन्मदिन मनाउनु भनेको उपहार प्राप्त गर्नु हुन्छ। तर, सिंगारपुका एक मानिसका लागि भने जन्मदिन मनाउनुको अर्थ ठीक यसको विपरीत हुने गरेको छ। पेसाले आइसक्रिम विक्रेता
युक्रेनको राजधानी किभमा अर्थोडक्स इस्टर उत्सवका क्रममा इस्टर बन्नीको पेन्टिंगसँग सेल्फी खिच्दै महिला।
नयाँदिल्ली, (एजेन्सी) भारतको पूर्वी राज्य ओडिसामा बच्चा छिनेर लाने एउटा बाँदरको प्रहरीले व्यापक खोजी गरिरहेको छ। बच्चाको लाश केही समयपछि एउटा इनारभित्र फेला परेको थियो। आमा सामुन्ने नै भएको घटनामा
यहाँ २२ रुपैयाँ भाडामा पाइन्छन् छानीछानी गर्लफ्रेण्ड
टाउको काटिएर पनि जीवित रहे कुखुरा
बैंकक, (एजेन्सी) सामाजिक सञ्जालमा एक कुखुरा चर्चाको विषय बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने विषय अनौठो त हुन्छ नै। यो कुखुराको विशेषता अनौठो मात्र होइन असम्भव जस्तै हो। अचम्मको कुरा
चीनको टिआंगोंग १ अन्तरिक्ष प्रयोगशाला पृथ्वीमा खस्दै
काठमाडौं । एक चिनियाँ स्पेस ल्याब (अन्तरिक्ष प्रयोगशाला) पुनः पृथ्वीमै १/२ दिनमै खस्ने भएको छ । अधिकारीहरुले चीनको अहिलेसम्मकै महत्वाकांक्षी अन्तरिक्ष परियोजनाको डरलाग्दो अन्त्य हुनलागेको बताएका छन् । ४० फुट
पृथ्वीलाई बस्नयोग्य बनाएको त्यो दुई अर्ब वर्षअघिको महाविष्फोटन
काठमाडौं । पृथ्वी जीव बस्नप्रतिकूलबाट अनुकूलतातर्फ कहिले आयो होला ? यसबारे धेरै जिज्ञासु हुनसक्छन् । पृथ्वीको यो परिवर्तन प्रक्रियाबारे अध्येताहरुले आफ्नो अध्ययन जारी राखेका छन् । पृथ्वीको परिवर्तन प्रक्रियाबारे पहिले
सय किलो बढी खोर्सानीको होम
सरोज यादव, विराटनगर मोरङको बेलबारी नगरपालिका–६ मा एक सय बढी किलो खोर्सानीको होम गरिएको छ। खोर्सानीबाट हवन गर्दासमेत खार नआउने विशेषता भएको सो हवन हेर्न नेपाल तथा भारतका श्रद्धालुको घुइँचो